ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမြို့မှ မြတ်မိုးရွှေစင်နှင့် တွေ့ဆုံစကားပြောခြင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Interviews & Profiles » ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမြို့မှ မြတ်မိုးရွှေစင်နှင့် တွေ့ဆုံစကားပြောခြင်း
ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမြို့မှ မြတ်မိုးရွှေစင်နှင့် တွေ့ဆုံစကားပြောခြင်း
Posted by kai on Feb 21, 2012 in Interviews & Profiles, Myanmar Gazette | 27 comments
၂၀၁၁အောက်တိုဘာလ၂ရက်နေ့မြောက်ပိုင်းကယ်လီဖိုးနီးယှားနဘျေအသစသူ မြို့ စေတော် ၀င်(၂)ဓမ္မစခန်းထီးတော်တင်တွင်ရတနာပုံနေပြည်တော်သတင်းစာအဖွဲ့သွားရောက်သတင်း ယူစဉ် မြောက်ပိုင်းကယ်လီဖိုးနီးယားဆိုင်ရာသတင်းနှင့်ဓါတ်ပုံများ ကူညီပေးပို့လေ့ရှိ သည့်’၀မ်းကိုကို’၏ မိတ်ဆက်ပေးမှုဖြင့် ထီးတော်တင်ပွဲသို့ မိဘများနှင့် အတူ ရောက်ရှိလာသော မြန်မာဝတ်စုံဝတ်ဆင်ထားသည့် မြတ်မိုးရွှေစင်အားတွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ပါသည်။
သမီးနာမည်က မြတ်မိုးရွှေစင်ပါ။ အဖေဦးအေြးွကယ်၊ အမေဒေါ်စိုးစိုးမြင့်။မွေးချင်း ၄ယောက်ရှိတယ်။ အမ၃ယောက်ရှိပြီးသမီးက အငယ်ဆုံးပါ။ မြန်မာလူမျိုး၊ ဗုဒ္ဓဘာသာပါ။ မွေးရပ်ဇာတိက မန္တလေးအမရပူရမြို့ကပါ။ အသက်၂၁နှစ်ပြည့်ပြီးပါပြီ။ မြန်မာပြည်ကနေဘယ်တုန်းကအမေရိကားကိုထွက်လာခဲ့တာလဲ၊
၂၀၀၆ခုဇူလိုင်လ သမီး အသက်၁၆နှစ်အရွယ်မှာ မြန်မာပြည်ကထွက်လာပါတယ်။ မိဘနဲ့ အတူလာတာပါ။ အမရပူရမြို့မှာ သူငယ်တန်းကနေ၁၀တန်းအထိ ကျောင်းတက်ခဲ့ပါတယ်။ ၁၀ တန်းစာမေးပွဲတော့ မဖြေဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ အမေရိကားရောက်တဲ့အချိန်မှာ ၁၁တန်းကို စတက်ပါ တယ်။ အခှုင်္ညေမညေခငျခသ ဃငအပ ဃသူနါန မှာ သမီးစိတ်ဝင်စားတဲ့ နြအတသမုငညါ ဘာသာကို တက်နေပြှီးင်္ညေမညေခငျခသှအအေန့ညငလနမျငအပ မှာ ဃသာစကအနမှခငနညခန ကိုအဓိကယူပြီး တက်နေပါတယ်။ နောက်၃နှစ်ကြာမှဘွဲ့ရပါမယ်။
သမီး အမေရိကားကို လာရမယ်ဆိုတာသိရတဲ့အရွယ်က ၈တန်းမှာပါ။သမီးမိဘတွေက အင်္ဂ လိပ်စာကျူရှင်နဲ့ စကားပြောသင်တန်းတွေကို ပို့ပေးလို့တက်ခဲ့ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်စာကိုပိုပြီး လေ့လာသင်ခဲ့တယ်။ ရန်ကုန်ကိုသွားပြီး သင်တန်းတွေဆက်တက်ခဲ့တယ်။
အများကြီးရှိတာပေါ့။ သမီး မြန်မာပြည်က ၁၀တန်းမဖြေပဲ ထွက်လာခဲ့တယ်။ ဒီရောက်တော့ ၁၁တန်းကိုစတက်ပါတယ်။ အမေရိကားလာဖို့ ဘယ်လိုပဲပြင်ဆင်လာခဲ့တယ်ဆိုပေမယ့်လည်း ဒီရောက်တော့လဲ စကားပြောဆိုတာ (နားထောင်ရတဲ့အပိုင်း) မှာ အခက်အခဲတွေ့ရတာပါပဲ။ မြန်မာပြည်ကိုပြန်ချင်စိတ်ပေါ်ခဲ့တယ်။ ဒီမှာ မြန်မာပြည်မှာ တက်ခဲ့ပြီးတဲ့အတန်းတွေကို တက်စရာ မလိုတော့ပဲ မတက်ခဲ့ရတဲ့ အတန်းတွေကို တက်ရတယ်။ အင်္ဂလိပ်စာနဲ့သင်္ချာက သမီးအတွက် တော့ အခက်အခဲ သိပ်မရှိခဲ့ပါဘူး။ အခက်အခဲဖြစ်တဲ့အပိုင်းက သိပ္ပံနဲ့ဇီဝဗေဒဘာသာ တွေမှာ လက်တွေ့ လုပ်ရတဲ့အပိုင်းတွေမှာ ဒုက္ခရောက်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ မြန်မာပြည်မှာ ငယ်ငယ်ကတည်းက စာတွေ့ပဲရှိပြီး လက်တွေ့လုပ်ရတာ တခါမှမရှိခဲ့ဘူးတော့ သမီးအတွက်အရမ်းအခက်အခဲ ဖြစ်စေတာပေါ့။ ဒီမှာက ကျောင်းသားတွေစုပြီး လက်တွေ့လုပ် ကြရတယ်။ သမီးကဘာမှနားမလည်လို့ မေးချင်ပေမယ့်လည်း ဘယ်ကစပြီးမေးရမှန်း မသိ ဘူး။ ကျောင်းမှာက သမီးလို နိုင်ငံခြားက ပြောင်းလာတဲ့ကျောင်းသားသိပ်မရှိဘူး။ ဒါပေမယ့် သမီးမလိုက်နိုင်လို့ နားမလည်တာတွေရှိလို့မေးရင် စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ ဖြေကြပါတယ်။ ကျောင်း ချိန်ပြီးလို့ အားလပ်ချိန်မှာ ဆရာတွေကို လိုက်မေးရတယ်။ မသိနားမလည်လို့ ကျောင်းစာ မပြီးရင်လဲ ဆရာတွေဆီမှာ ရက်ပိုတောင်းပြီးလုပ်ရပါတယ်။ ဆရာ၊ ဆရာမတွေကလဲ အချိန်ပို သင်ပေးပါတယ်။ စိတ်အညစ်ရဆုံးအချိန်ကတော့ ထမင်းစားချိန်ပါပဲ။ ဘယ်နေရာမှာ ဘာသွားစားရမှန်း မသိသေးတော့ အိမ်ကယူလာတဲ့ထမင်းဘူးကိုပဲ တယောက်တည်း တနေရာ မှာ စားရတယ်။ ရောက်စဆိုတော့ သူငယ်ချင်းလဲမရှိတော့ စိတ်တော်တော်လေးညစ်မိပါတယ်။ မြန်မာပြည်ကို အရမ်းသတိရမိတယ်။ နောက်ကြာလာတော့မှ သူငယ်ချင်းတွေရှိလာပြီး နေသား ကျသွားပါတယ်။ ၆လလောက်ကြာမှနေသားကျလာပါတယ်။
အမေရိကားကို နောက်ထပ်လာကြမယ့် ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကို အင်္ဂလိပ်စာကို သေသေချာချာပြင်ဆင်လာပါလို့။ သမီးမြန်မာပြည်ကနေ ပြင်ဆင်လာကြတယ် ဆိုပေမယ့်လဲ ဒီမှာကမတူဘူး။ ဒါကြောင့် ဖြစ်နိုင်ရင် အင်္ဂလိပ်စာကို အထူးကြိုးစားသင်ပြီးလေ့လာခဲ့ပါလို့ မှာချင်ပါတယ်။
အမေရိကားရောက်ပြီးမှ ၂၀၀၆ခုနှစ်ကုန်မှာ အင်္ဂလန်ကို မိဘတွေနဲ့အတူ သွား လည်ဖြစ်ပါတယ်။၂ပတ်လောက်ကြာပါတယ်။လန်ဒန်မြို့အနီးအနားတ၀ိုက်ကမြို့တွေကိုလျှောက်လည်ဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကနဲ့အင်္ဂလန်ကွာခြားချက်က၊ အမေရိကနဲ့ အင်္ဂလန်နဲ့ အရမ်းကွာပါတယ်။ အိမ်ပုံစံနဲ့ အစားအသောက်တွေ မတူပါဘူး။ အစားအသောက်တွေ သိပ်မတူဘူး။ ဒီဇင်ဘာလမှာ ရောက်သွား တော့အရမ်းအေးပြီးအရမ်းချမ်းတယ်။ရာသီဥတုဆိုးတယ်လို့ထင်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာဘယ်မြို့တွေရောက်ဘူးသလဲ၊ နောက်နှစ်မှာပြန်လည်ဖို့ရှိပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာတုန်းက အများဆုံး ရောက်ဖြစ်တာက ပုဂံကိုပါပဲ။ ရန်ကုန်မြို့လောက်ပဲရောက်ဖြစ်တယ်။တခြား ဘယ်မှသိပ်မသွားဖူးပါဘူး။ ဒီတခေါက်ပြန်ရင် မရောက်ဘူးတဲ့နေရာတွေ သွားလည်မယ်လို့ စိတ်ကူးနေတယ်။ ကျိုက်ထီးရိုး၊ တောင်ကြီး၊ မြစ်ကြီးနား တို့ကိုသွားလည်ချင်တယ်။
မိဘများကအမရပူရမှာ’ရွှေလွန်းအိမ်’ဆိုတဲ့ယက်ကန်းစင်တွေရှိပါတယ်။အခုအမတွေကဆက်လက်လုပ်(ကိုင်)နေကြပါတယ်။ အထည်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကွန်ပျူတာဒီဇိုင်းမျိုးကိုစိတ်ဝင်စားသလား၊ မြန်မာပြည်က ထွက်မလာခင်အထိ စိတ်ဝင်စားလို့ ၀င်လုပ်ကြည့်ပါသေး တယ်။ ခုထွက်လာတာလဲ နဲနဲကြာတာရယ်၊ နောက်ပိုင်းမှာ ဆေးရေးတို့၊ပန်းဖေါ်တာတို့အများကြီးထပ်ထွက်လာတော့လိုက်မမှီတော့ဘူး။
သမီးကတော့ နာမည်ကြီးအမှတ်တံဆိပ်တွေမှ မဟုတ်ပါဘူး။ ၀တ်ကြည့်လို့ အဆင်ပြေတာမျိုးကိုဦးစားပေးဝယ်ဝတ်ပါတယ်။
သမီး ငယ်ငယ်ကတော့ သီချင်းဆိုတာဝါသနာပါတယ်။ အိမ်မှာနဲ့ ကာလာအို ကေတွေမှာသီချင်းတွေဆိုဖြစ်တယ်။ နောက်တော့ ကိုယ့်အသံကလဲ မကောင်း ဘူး။ အဆိုတော်လဲဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာ သိလာတယ်။ ခုနောက်ပိုင်းမှာ သူငယ်ချင်းတွေ အကူအညီတောင်းရင် ဓါတ်ပုံရိုက်ပေးတာနဲ့ ဗီဒီယိုရိုက် ပေးတာတွေတော့ လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ အားကစားအနေနဲ့ မြန်မာပြည်မှာတုန်း က ရေကူး၊ကြက်တောင်ရိုက်၊ဘတ်စကက်ဘော ကစားတာ ၀ါသနာပါပါ တယ်။ ခုဒီမှာ ကြက်တောင်ပဲရိုက်ဖြစ်တာများပါတယ်။
ဆန်ဖရန်မှာလုပ်တဲ့ရှိုးပွဲတွေကိုကြည့်ဘူးသလား၊ မင်းသားထဲမှာမင်းမော်ကွန်း၊ မင်းသမီးထဲမှာ အိန္ဒြာကျော်ဇင်တို့ကို ကြိုက် ပါတယ်။ အဆိုတော်ထဲမှာ ၀ိုင်းဝိုင်းနဲ့ဇော်ပိုင်ကိုကြိုက်တယ်။ မြန်မာပြည် မှာ ငယ်ငယ်ကတည်းက ပွဲတွေသိပ်မကြည့်ဖြစ်တော့ ဒီမှာလည်းပွဲတွေ တခါမှ သွားမကြည့်ဖြစ်ဘူး။
အမှတ်တရဖြစ်တာတွေကတော့အများကြီးပါပဲ။ အဲဒီအထဲမှာ အမေရိကား ကို ထွက်လာတဲ့နေ့မှာ အမတွေက လေဆိပ်ကိုလိုက်ပို့ကြတာကို အမှတ်တရ ဖြစ်မိတယ်။ သမီးက လုံးဝမတူတဲ့ တိုင်းပြည်နေရာသစ်ကို သွားရမှာမို့ စိတ် အရမ်းလှုပ်ရှားမိခဲ့တယ်။ ဒီရောက်လာတော့ မြန်မာပြည်က သမီးတို့ရဲ့ မိသားစု အသိုင်းအ၀ိုင်းကို သတိရလွမ်းတယ်။ ဒီမှာက သားအမိသားအဖ ၃ယောက် တည်း ရှိတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ မိသားစု သိုက်သိုက်ဝန်းဝန်းရှိတာ တွေကို လွမ်းမိတယ်။
သမီးကစာသင်ပေးတာဝါသနာပါတယ်။ ခုတက်နေတဲ့ နြအတသမုငညါ နဲ့ ကျောင်းမှာစာပြန်သင်ပေးချင်ပါတယ်။သမီးပုံမှန်အထက်တန်းကျောင်းကိုပြောင်းတက်ပြီးတဲ့နောက်မှာစာသင်ပေးတာလုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ နြအတသမု ဗိာငည အလုပ်လုပ်ချင်ပါတယ်။ျြေအနမ ဘွဲ့လွန်လဲဆက်ချင်ပါတယ်။
သမီးက အခုကျောင်းကို အချိန်ပြည့်တက်နေလို့ အလုပ်တော့မလုပ်ဖြစ်ပါ ဘူး။ အားလပ်ရက်တွေမှာ အိမ်မှာနေရင်း အင်တာနက်ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွေကို ကြည့်တယ်။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့လျှောက်လည်တာလောက်ပဲရှိပါတယ်။
ကွန်ပျူတာ၊ အီလက်ထရွန်နစ်၊အတတ်ပညာတွေနဲ့ဆိုင်တွဲ့ငဖာသအသ.ခသာ ကိုကြည့်တာများတယ်။ ဖေ့စ်ဘွတ်ကတော့ တနေ့၂ခါလောက် ၀င်ကြည့်ပေ မယ့်ကျောင်းစာများလို့အချိန်သိပ်မပေးဖြစ်ဘူး။
သမီးစာဖတ်တာကြိုက်ပါတယ်။ မြန်မာစာအုပ်တွေထဲမှာ စာရေးဆရာ အကြည်တော်ရဲ့ဝတ္ထုကို ဖတ်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ ၀တ္ထုတွေ ဖတ်ဖြစ်ပေ မယ့် ခုဒီမှာကျောင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့စာတွေတော်တော်များများဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။
ဟုတ်ကဲ့။ သမီးသူငယ်ချင်းရဲ့ကွန်ပျူတာတွေနဲ့ ကိုယ့်ကွန်ပျူတာတွေ ပျက်ရင် ပြင်ပါတယ်။
ကျောင်းစာတွေများလို့တီဗီကိုမကြည့်ဖြစ်တာများတယ်။ ဘယ်လိုအစားအစာတွေကိုကြိုက်သလဲ၊ မြန်မာစာကြိုက်တယ်။ ရခိုင်မြီးရှည်ကြိုက်တယ်။ အာရှစာပိုကြိုက်တယ်။ခုတော့အိမ်မှာကိုယ့်ဖာသာကိုယ်ကြိုးစားချက်ပါတယ်။ အမေက အမြဲချက် ပေးနေပေမယ့် ကိုယ်စားချင်တာလေးတွေ ချက်တတ်အောင် သင်ပါတယ်။ကိုယ့်ဖာသာကိုယ်ချက်ကြည့်ပါတယ်။ စားလို့တော့မကောင်းသေးဘူး။
သမီးကားမမောင်းသေးဘူး။ ကားအကြောင်းလဲသိပ်မသိဘူး။လူအများ ကြိုက်ကြတဲ့ တိုယိုတာကားတွေကိုပဲ ကြိုက်ပါတယ်။ ကွန်ပျူတာက ဗခနမျွနမငနျ ကိုသုံးပါတယ်။ ဖုံးက ငဏ့သညန ကိုသုံးပါတယ်။ ငဏေိ တော့မရှိသေး ဘူး။ ကင်မရာရှိပေမဲ့ သိပ်မသုံးဖြစ်လို့ ဘယ်ရောက်နေမှန်းတောင်မသိဘူး။အခုကင်မရာအသစ်တလုံးဝယ်ဖို့စဉ်းစားနေပါတယ်။
ုညသတနူါန ငျ ဏသတနမ… စာဖတ်ပါတယ်၊ အင်တာနက်အွန်လိုင်းကနေ လည်းအသိပညာဗဟုသုတတွေရအောင်လေ့လာပါတယ်။
အရင်က သမီး ဒီသတင်းစာရှိမှန်းတောင် မသိပါဘူး။
သတင်းစာတွေ့ရတော့ တော်တော်လေးဝမ်းသာပါတယ်။ သမီး ဒီသတင်းစာကို အမြဲဖတ်ဖြစ်ပါ တယ်။ သတင်းစာမှာပါတဲ့ အစားအသောက်ချက်နည်းပြုတ်နည်းတွေကိုလဲ ချက်ကြည့်ပါတယ်။ နိုင်ငံအနှံမှာရှိတဲ့ မြန်မာသတင်းလေးတွေကို ဖတ်ရတာ ကြိုက်ပါတယ်။ ခုလဲ သတင်းတွေက များတော့များပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီ့ ထက်သတင်းတွေ ပိုစုံပိုများစေချင်ပါတယ်။
ရတနာပုံနေပြည်တော်သတင်းစာ၏ တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းကို စိတ်ရှည်လက်ရှည် အချိန်ပေး ၍ဖြေဆိုပေးသော မြတ်မိုးရွှေစင်၊ မိတ်ဆက်အကူအညီပေးသော ၀မ်းကိုကို နှင့် အလှ ဓါတ်ပုံရိုက်ပေးသောမြတ်ကောင်းတို့အားအထူးကျေးဇူးတင်ပါသည်။♦
မှတ်ချက်။ ။ မန္တလေးဂေဇက်ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၂ တွင်ဖေါ်ပြပြီးဖြစ်သည်။
ဂီဂီ မှတ် မှတ်…
ညာဘက်ပေါင် ဘေးဘက်ခြမ်း …
အညိုရောင် ဒင်္ဂါးဝိုင်း အရွယ် အမှတ် -၁ ရှိ…
ဘာတုန်းဟ ….စကင်းတုန်း ပြန်တို့ရင်
အနုပညာ မျက်ချိ နဲ့ ကြည့်ဇမ်းဘာကွယ်…
သတင်းစာထဲ..အလှပန်းဆိုတဲ့ ကဏ္ဍရှိပြီး.. အမြဲ.. မြန်မာပြည်အပြင်မှာနေတဲ့.. တယောက်ယောက်ကို.. အင်တာဗျုးလုပ်ပါတယ်..။
ဒီထဲ.. တင်ပြီဆို.. ကာယကံရှင်..လာဖတ်ချင်လည်းဖတ်မှာပါ..။
ဒို့ရွာသူားတွေ… နည်းနည်းတော့.. ဘရိပ်ကလေးဆွဲထားပါနော…။
ကွိစိကွစတွေကလွဲ ကျန်တာဖတ်လို့ ရ၏..
လိမ်မာတယ်လို့ ပြောမို့ ဘာ
ခေးမပြောသလို သတင်းများများ ထည့်ပေးစေချင်ပါတယ်သဂျီးရဲ့
ဒီနေ့ပီဒီအက်ဖ် ဒေါင်းပြီး ဖတ်ကြည့်တာ ဖတ်စရာလဲ သိပ်မတွေ့ သလားလို့ ….
ရွာသားများထဲမှ လူငယ်ခြေတက်စိန်ပေါက်ပေါက်အတွက်… သဂျီးမှကြိုတင်… ဘွတ်ကင်လုပ်ခြင်းလို့မြင်ပါတယ်… သတိ နှူးဘာဂိုဏ်းသားများမကပ်ရ….
နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ မြန်မာဝတ်စုံကို အမြတ်တနိုးဝတ်တတ်တာနဲ့တင် အမှတ်ပြည့်ပေးလိုက်မယ်။ အလှပန်းကဏ္ဍမှာ သတင်းထောက် မလိုဝူးလား သဂျီး။
ထူးချွန်မယ့် တက်သစ်စလေးတွေ တွေ့ထားလို့ပါ။ (ဝေးဝေးရှာရန်မလို)
ဖင်နဲ့ရင်ကို အဲသလို ဖုံးတာနဲ့ ပဲ မြန်မာ ၀တ်စုံ
ပဏာယူချင်ယင်များ ကြံဖန် ယူတတ်တယ်
ဓာနဲ့နေပါအူး
အဲသည် နီကြောင်ကြောင် ခေါင်းမွှေးတွေကယော
myatmoe fri says:
သဟာမျိုးကို အဘတို့က လက်ဖက်ထက်ကြိုက်တယ်
ပညာတွေတတ်အောင်သင်ပြီး ဦးကြီးတို့ရွာမှာ ကျောင်းဆရာမလာလုပ်ပါလားကွယ်
ဟမလေး စိတ်ရှိလက်ရှိ ကဗျာဖွဲ့ပြလိုက်ခြင်ပါဘိတော့
ဖျားဖျား စိုင်း2 သီချင်းထဲ က လို “မင်းလေးက ဟော့တယ်”
ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ အမေဒိကားလိုနိုင်ငံမျိုးမှာ ပညာကျိုးစားသင်ယူနေတာ အားကျလိုက်တာ..
ကိုယ့်တိုင်းပြည်ပြန်လာပီး အကျိုးပြုနိုင်ပါစေလို့သာ ဆုတောင်းပါရဲ့…
ရွာသူလေး လုပ်ချင်ဝူးလား ကွယ်…
ထိပ်တုံးကြောက်လို့ ညက အိပ်မက်မက်ကြောင်း ပြောပြဖို့ မေ့သွားပါတယ်ခေးရယ်….
ခလေးမနှယ် အနေမတတ်လိုက်တာ…။ ဘာမှ မမြင်ရဘူး..ဟူး..ဟူး…
အင်း အင်တာဗျူးလေးတွေ ဖတ်မိရင်ဖြင့် ကိုယ့်ဘာသာ အလိုလိုအားငယ်မိတယ်။ ဘယ်သူကတော့ ဘယ်နေရာမှာ ဘာကျောင်းတက်နေတာ နောင်ကို ဘာပညာဆက်သင်မယ်ဆိုတဲ့ အဖြေလေးတွေ ဝေေ၀ဆာဆာနဲ့ တွေ့ရတဲ့အခါ ဘ၀ချင်းတွေ မတူသလို ခံစားရတယ်။ ဘ၀ပေးကောင်းလိုက်ကြတာနော်လို့လည်း တွေးမိတယ်။
Is the glass half empty or half full? isacommon expression, used rhetorically to indicate thataparticular situation could beacause for optimism (half full) or pessimism (half empty); or asageneral litmus test to simply determine an individual’s worldview. The purpose of the question is to demonstrate that the situation may be seen in different ways depending on one’s point of view and that there may be opportunity in the situation as well as trouble.
Marketer thinks ur glass needs “Re-sizing”
တကယ်တော့ ဘဝ မှာ ကိုယ့်ထက် နောက်မှာ ရှိ တဲ့ လူတွေကို လဲ မြင်ကြည့်လို့ ရပါသေးတယ်။
ဖြစ်သင့်တာကတော့ ကိုယ့်ဘဝ ကို သူများ နဲ့ နှိုင်းတာထက် စာရင် ဒီနေ့ နဲ့ မနေ့က မနော ကို သာ ယှဉ်လိုက်ပါ။
ဒီနေ့ မနော က မနေ့က မနော ထက် ပိုပြီး ကြိုးစားမယ် ဆိုရင် မနက်ဖြန် မနော ဟာ နောက် ကျန်နေစရာ၊ အားငယ်နေစရာ အကြောင်းမရှိပါဘူး။
မြန်မာပြည် အပြင်မှာ နေတဲ့ သူတိုင်းမှာ လဲ သူ့ ဒုက္ခ နဲ့ သူ ချည်း ပါဘဲ သမီးရေ။
လက်ရှိ မှာ အကောင်းဆုံး ဖြစ်အောင် ကြိုးစားပြီး စိတ်ကောင်းမွေး နေနိုင်ရင်ဘဲ လူဖြစ်ကြိုးနပ်ပါတယ် ကွယ်။
This is the girl from Amarapura. It was my home town.
I am proud of you for Amarapura.
Dear Ko Pauk ( MDY ),
Can we visit to her sisters when we go Taung Tha Man?
( To learn their weaving business Only- Don’t think wrongly ).
အလို အခုမှပဲ သူလေးအကြောင်းနဲ့ သူလေးပုံတွေ မြင်သိရတယ်